Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အရေးပေါ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်များကူညီပံ့ပိုးရေး အဖွဲ့ (မောင်တောခရိုင်)
အရေးပေါ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်များကူညီပံ့ပိုးရေး အဖွဲ့ (မောင်တောခရိုင်)
by Devid Coper on Tuesday, 12 June 2012 at 21:58 ·
Association of Assistance for Emergency Victims and Refugees (Maung Daw District)
မောင်တောခရိုင်ရှိ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အရေးအခင်း၏ သားကောင်များဖြစ်သော အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခ သည်များအား အစားအသောက် အ၀တ်အစားနှင့် ချက်ပြုတ်ရန်လိုအပ်သော လောင်စာများအား ကူညီပံ့ပိုး ပေးလျှက်ရှိသော မြို့ပေါ်ရှိ လူထုများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ အရေးအခင်း စဖြစ်ပြီးချိန်မှ ယခုထိ မိမိတို့မြို့ပေါ်ရှိ လူများတတ်အား သရွေ့အလှူငွေများနှင့် အဝေးရောက် ရခိုင်လူမူအဖွဲ့ အစည်းများ၏ ပေးအပ်လှူဒါန်းသော အလှူငွေများဖြင့် အရေးအခင်း ဒုက္ခသည်များအား အစား အသောက် အ၀တ်အထည်များ ကူညီပံ့ပိုးလှူဒါန်းပေး လျှက်ရှိပါသည်
အဝေးရောက်ရခိုင်လူမူအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ယခုရေးအခင်းကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ဖြစ်နေကြသော မိ မိလူ မျိုး ဒုက္ခ သည်များအား အစားအသောက်နှင်ပစ္စည်းများ ကိုလည်းကောင်း၊ ငွေသားများကို သော် လည်းကောင်း လှူဒါန်း လိုပါက ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့၏ အောက်ပါ ဦးစီးဦးဆောင်ပြုသူတို့အား ဆက်သွယ်လှူဒါန်း နိုင်ပါသည်။
(၁) ဦးစိုးဝင်း (098515792)
(၂) ဦးမောင်အေး (0949678187)
(၃) ဦးအောင်မင်းနိုင် (098501781)
ယခုလက်ရှိ အဝေးရောက်ရခိုင်များမှ လှူဒါန်းထားသော ငွေသားများ
(၁) စင်ကာပူ ရောက်ရခိုင်အဖွဲ့ (ကျပ်သိန်3း0)
(၂) ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်ဘေးအန္တရာယ် ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကော်မတီ (ရန်ကုန်) ကျပ်သိန်း (30)
(၁) အလိုတော်ပြည်ပရဟိတဘုန်းကြီးကျောင်း ယာယီဒုက္ခသည်စခန်း
လူဦးရေ - 308 ယောက်
ဆန်- 11 အိတ်
ပဲ - 1 အိတ်
ဆား- 1 အိတ်(35 ပိဿာ)
ငရုပ်သီးခြောက်- ဆာလာအိပ်ကြီးတစ်ဝက်
(၂)4မိုင်ယာယီဒုက္ခသည်များစခန်း
လူဦးရေ - 1577 ဦး
ဆန် - 70 အိတ်
စားဆီ- 50 ဂါလန်
ပဲ - 70 ပိဿာ
ဆား - 35 ပိဿာ
ငရုပ်သီးခြေက် - 55 ပိဿာ
လူဦးရေ - 600 ဦး
ဆန် -22.5 အိတ်
ပဲ - 1အိတ်
ဆား -1 အိတ်
ငါးရုတ်သီးခြောက် -0.5 အိတ်
(၄) ဗဟိုကျောင်း ယာယီဒုက္ခသည်စခန်း
လူဦးရေ - ၃၃၇ ဦး
ဆန် - ၁၂ အိတ်
ပဲ - ၁ အိတ်
ဆား - ၁ အိတ်
ငရုတ်သီးခြောက် - ၀.၅ အိတ်
(၅) မြို့မကျောင်း ယာယီဒုက္ခသည်စခန်း
လူ - ၆၁ ဦး
ဆန် - ၃ အိတ်
ဆီ - ၁ အိတ်
ဆီ - ၁၀ ဂါလံ
ငရုတ်သီး - ၁.၅ ဂါလံ
ဆန် - ၁ အိတ်
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: အရေးပေါ်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဒုက္ခသည်များကူညီပံ့ပိုးရေး အဖွဲ့ (မောင်တောခရိုင်) . All Rights Reserved